Ama-tattoo e-DNA: asho ukuthini kanye nemibono yokukukhuthaza | Ukuzidweba umzimba
Nathi Cerezo | | Ama-tattoos anezimo
Uma kukhona into eyodwa esingaqiniseka ngayo, ukuthi ama-tattoos e-DNA apholile kakhulu. Okwangempela nangokuthinta kwesayensi nesimanje, kuhle kakhulu kulabo abafuna idizayini eqondile, kungaba okumnyama nokumhlophe noma umbala, futhi abafuna okuthile okuguquguqukayo.
Ingabe ufuna okuningi? Ama-tattoo e-DNA anencazelo engalindelekile kakhulu. Uma ufuna ukwazi ukuthi kuyini, kuzodingeka ukuthi uqhubeke ufunda, ngaphezu kwalokho, sizophinde sikhulume ngendlela yokusebenzisa ngokunenzuzo, phakathi kwezinye izinto eziningi. Futhi, uma unentshisekelo kwisayensi, bheka lesi esinye isihloko ilukuluku lama-tattoos, isayensi noyinki.
1 Incazelo yama-tattoos e-DNA
1.1 Lapho sivela khona
1.2 Isayensi yokuphila ende
1.3 Ukujabulela ngokugcwele
2 Imibono kanye nendlela yokusebenzisa ama-tattoo e-DNA
2.1 Evundlile noma mpo
2.2 Okumnyama nokumhlophe noma ukuthintwa kombala
2.3 Wedwa noma uhamba
2.4 Ama-tattoos amancane e-DNA
2.5 I-tattoo enhle
3 Izithombe ze-DNA tattoos
Incazelo yama-tattoos e-DNA
Incazelo yama-tattoos afaka i-DNA ihlobene eduze nokuthi iyini i-DNA: akukho okunye futhi akukho okuncane kunalokho iketango eliphindwe kabili le-helix elisenza sibe yilokho esiyikho futhi lisivumela ukuthi siqhubeke sikhula. Uma lokhu kwaziwa, ucabanga ukuthi le tattoo ingasho ukuthini?
Lapho sivela khona
Kulula kakhulu: enye yezincazelo ze-DNA ukukhumbula bonke okhokho bethu, njengoba i-DNA ingase ibhekwe njengeketango elisiza ekulawuleni ukwaziswa kofuzo, okungukuthi, yonke into, enhle noma embi, esikwabelana ngayo nomndeni wethu. Ngakho-ke nakuba kungase kungabonakali sengathi ekuqaleni, lolu hlobo lwe-tattoo lusebenza kahle kakhulu njengomklamo womndeni. Indlela yokuqala yokubonisa ukuxhumana kwakho nomndeni wakho, isibonelo, ngokufaka amagama akho ezinhlayiyeni ze-DNA.
Isayensi yokuphila ende
Ngaphezu kwalokho, i-DNA, ngokwemvelo, ihlobene nesayensi nakho konke okungokwesayensiYingakho kuyisizathu esivame ukuhambisana nophawu olungakholelwa kuNkulunkulu, olumemeza umhlaba wonke ukuthi ukholo lwakho alutholakali entweni enentshebe evela emkhathini, kodwa ngokwazi ukuthi, kancane kancane, uhlanga lwesintu luyahlaziywa. . .
Enye yezincazelo ezingase zibe khona ukuthi i-DNA ikhombisa umsebenzi wokuzilibazisa osuwudidiyele ebuntwini bakho, okuyingxenye yakho. Ngoba, kuvamile ukuthi lo mklamo uhambisane nesinye isici. Ngokwesibonelo, uma uthanda ukudlala upiyano, ungahlanganisa uchungechunge lwe-DNA nomculo owuthandayo noma nesithombe sensimbi. Noma, njengasesithombeni, uma uwathanda ngempela amabhayisikili ungakwazi ngisho nokushintsha i-DNA ibe wuchungechunge lwamabhayisikili.
Imibono kanye nendlela yokusebenzisa ama-tattoo e-DNA
Kunezindlela eziningi zokusebenzisa lezi zinhlobo zama-tattoos, njengoba bezinikela kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, babukeka behle kakhulu ngezitayela eziningi ezahlukene. Ngokwesibonelo:
Evundlile noma mpo
Omunye wemibuzo yokuqala okufanele uzibuze yona ukuthi ukhetha ukwakheka okuqondile noma okuvundlile. Lokhu kunganqunywa kalula uma usuvele wazi ngokuqinisekile lapho ufuna ukuzidweba khona. Isibonelo, emlenzeni noma ezimbanjeni idizayini enkulu neqondile izoba ngcono, kuyilapho ku-nape kuyodingeka iqonde kodwa ibe mncane kakhulu (ngaphandle uma ihlanganisa wonke umhlane). Endabeni yama-tattoos avundlile, abukeka emuhle engalweni, engalweni noma emilenzeni, ngisho nangendlela yomngcele.
Okumnyama nokumhlophe noma ukuthintwa kombala
Okuhle nge-DNA ukuthi, njengoba sishilo, ibukeka kahle ngezitayela eziningi, ngakho-ke isinqumo siphinde sinqunywa incazelo nobukhulu besiqephu osifunayo. Okumnyama nomhlophe, okunomthunzi omuhle, kungenza umklamo wonke uvelele ngokudonsela phansi okukhulu, kuyilapho umbala uzowunikeza isitayela esingavamile. Ngisho nemibala oyikhethayo inganquma ukuthi ukhetha inketho eyodwa noma enye: isibonelo, imibala ejabule kakhulu, ephuzi noma ebomvana, izophinde idlulisele amandla nenjabulo.
Wedwa noma uhamba
Ngaphambi kokuthi nathi sikushilo lokho Imidwebo ye-DNA ingaba yodwa noma ihambisane nesici esithile. Kulesi simo sesibili, njengoba kubonakala, sizodinga ucezu olukhudlwana ukuze umklamo ungabonakali ugcwele kakhulu futhi udukisa. Njengoba idizayini enosayizi omkhulu, iphinde isekele imidlalo eminingi, ngokwesibonelo, isihlahla se-DNA sizodlulisa umbono wokuhlonipha okhokho bakho kuyilapho sivumela idizayini enamagatsha, imibala kanye nemininingwane eminingi.
Ama-tattoos amancane e-DNA
Kuthiwani uma sifuna umklamo omncane? Ayikho inkinga, I-DNA ibukeka iyinhle nasemiklameni eminingi engaphansi kwesakhiwo. Kulesi simo, ungadlala ngombala (nakuba ungebaningi noma uhluke kakhulu, ukuze ungadukisi) kanye ne-dynamism. Eqinisweni, i-DNA ingachazwa kalula, njengokungathi yenziwe ngepensela, ukunikeza umbono wokuthi iyanyakaza.
Mayelana nama-tattoos amahle kakhulu futhi athambile kakhulu, i-DNA nayo ipholile kakhulu. Kulesi simo, kungcono ukuthola indawo lapho umklamo uhambisana ngokwemvelo (njengesihlakala, umphambili, intamo ...) futhi, ngokusobala, sebenzisa imigqa emihle kakhulu, enohlaka olucacile kodwa oluqinile nolubucayi futhi ngaphandle komthunzi. Uma kuziwa kumbala, isitayela esincane se-watercolor singaba kuhle, nakuba umnyama uzongeza umuzwa wobulula.
Ama-tattoo e-DNA ayamangalisa, kodwa futhi anezincazelo eziningi ezahlukene nezingalindelekile ezizokushiya ubambe ongezansi. Sitshele, ingabe unayo i-tattoo efanayo? Kusho ukuthini kuwe? Ucabanga ukuthi kukhona esikushiye kulindile, njengencazelo ethile noma umqondo?
Izithombe ze-DNA tattoos
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Ama-tattoos anezimo » Ama-tattoo e-DNA: akushoyo kanye nemibono yokukukhuthaza